चन्द्र खत्री (स्वामी सत्यव्रत), आजसम्म अध्यात्मलाई परम्परित रुपमा अ–थ्र्याने काम भएको छ । मुर्दालाई काँधमा बोकेर हिड्दैमा त्यो जीवित हुन सक्दैन तर त्यसै गरी हिड्ने काम भएको छ ।
अध्यात्मलाई स्वयंले आत्मसात गर्नु पर्छ, स्वयंदेखि स्वयंसम्मको यात्रा नै आध्यात्मिक यात्रा हो । यो सबैले आफ्नै बलबुतामा आर्जन गर्नु पर्ने हुन्छ ।
मैले मेरो आफ्नै Authority मा भन्दछु कि आफ्नो स्वतन्त्रता, शान्ति, आनन्द र उत्सबलाई तिलाञ्जली दिएर अरुको So called respect कसैले पाउन चाहन्छ भने जानी नजानी त्यस व्यक्तिले आप्mनै हत्या गरिरहेको छ ।
Break the pattern, Break the barriers and Break the bondge. अध्यात्मवादी व्यक्तिले कुनै पनि प्रकारको बन्धनलाई स्वीकार्दैन, यसलाई कसरी बुझ्नुहोस् भने अध्यात्मवादी व्यक्तिको लागि कुनै बन्धन नै हुँदैनन् ।
अध्यात्मवादी व्यक्ति सुख र दुःखको साक्षी हुन्छ, जीवन र मृत्युको साक्षी हुन्छ, दिन र रातको साक्षी हुन्छ, अध्यात्मवादी व्यक्ति यी मध्ये कुनै पनि होइन । बन्धन युक्त व्यक्तिले आफूलाई अध्यात्मवादी भनेर दावी नगर्दा हुन्छ ।
अध्यात्म भनेको आत्मा हो, आत्मा विनाको शरीरको कल्पना कसरी गर्न सकिन्छ ? विचार हैन मनन गर्नु पर्ने बेला आएको छ है ।
अध्यात्म विनाको विज्ञान अन्धो हुन्छ भने विज्ञान विनाको अध्यात्म लङ्गडो हुन्छ तथापी आध्यात्मिक साक्षात्कारको क्षेत्रमा विज्ञानले धेरै पछिमात्र प्रमाण फेला पार्न सपल भएको छ, प्रमाण कानून हो, कानूनको आवश्यकता त्यति बेला आवश्यकता पर्छ जति बेला विश्वास र श्रद्धामा संकट आउँछ, कानूनले Quantity हेर्छ, Quality भन्दा पनि ।
अध्यात्मलाई उसको realization नै प्रमाण हो तर भौतिकतामा वा कानूनमा प्रमाण चाहिन्छ, आजभन्दा पाँच, छ हजार वर्ष पहिले नै हाम्रा आध्यात्मिक महात्माहरुले जुन आत्माका उपलब्धिहरु दिएर हाम्रो सँस्कृतिलाई धनी बनाई दिएर गए, त्यस तथ्यलाई आहले आएर बैज्ञानिकहरुले प्रमाण दिदै छन् कि हिग्स बोसन “ईश्वर कण” पाइयो । के हो अध्यात्म ?
त्यो हिग्स बोसनको बारेमा पत्ता लगाउने पनि आत्मा नै हो खै त्यस बारेमा अगाडि बढेको ? यस उपलब्धिलाई नकारेको हैन तर आत्माको बारेमा र आत्माद्वारा भएका उपलब्धिलाई हैन कि आत्मालाई नै जान्ने बाटोमा बैज्ञानिकहरुले पनि आप्mना पाइलाहरु चाल्नु जरुरी छ ।
यस अर्थमा अलि प्रष्ट हुनु आवश्यक भएको मलाई महसुस भएको छ, यस अर्थमा कि प्रमाण भन्छौ – प्रमाण विना कुनै पनि सत्य तथ्यलाई प्रमाणित गर्न सकिदैन, कानूनले प्रमाणलाई हेर्छ, प्रमाण कति बेला आवश्यक पर्छ त ? कानून त्यति बेला आवश्यक पर्छ जति बेला सत्यलाई असत्य र असत्यलाई सत्य सावित गर्न खोजिन्छ किनकि सत्यलाई कुनै प्रमाणको आवश्यकता पर्दैन ।
सत्य आफै एक्लै उभिन सक्छ । जति पनि यस धर्तीमा असत्य कार्यहरु भएका छन् ती सबै सत्यको आडमा भएका छन्, असत्यवादीहरुले सत्यबाट खुट्टा सापटी लिएर कार्य गरिरहेका छन् किनकि असत्यका आप्mना खुट्टा हुँदैनन् । श्रद्धा र विश्वासमा संकट आउँछ, आत्मिक उपलब्धिका लागि कुनै कानूनको आवश्यकता पर्दैन, त्यही श्रद्धा र विश्वासको कमि हुँदैन ।
शाश्वत सत्य के हो भने कानूनले, न्यायलयले Quantity मा ध्यान दिन्छ Quality मा हैन तर अध्यात्मले Quality मा ध्यान दिन्छ । छोटकरीमा राख्न चाहन्छु १ करोड चोरी गर्नु र १ सय चोरी गर्नुमा कानूनमा सजाय एक प्रकारको छैन तर अध्यात्ममा चोरी चोरी नै हो, कुनै भेद मान्दैन ।
किन यस्तो भएको भन्दा भौतिक यात्रा, विज्ञानको यात्रा भनेको relative matter सित related हुन्छ, यो सापेक्ष सत्य हो । यसको काम छैन भनेको हैन, म पाँच बर्षको हुँदा लगाउने भोटो अहिले मलाई ठीक हुँदैन यसको अर्थ त्यो भोटो कामको थिएन भन्ने हैन कुनै बेलामा कामको थियो, अहिले कामको भएन किनकि म परिवर्तन भएँ भोटो जहाँको तही नै छ तर आध्यात्मिक यात्रा भनेको absulate realization सित related हुन्छ ।
यो भनेको शाश्वत सत्य हो, यसले भौतिकतालाई छोडेको हुँदैन तर भौतिकताले कही कही अध्यात्मलाई छोडेर दुर्घटनामा परेका अनगिन्ति घट्नाहरु छन् ।
“आत्मा र शरीर, दिन र रात, सुख र दुस्ख, जीवन र मृत्यु अध्यात्म र भौतिकता एक आपसका विरोधी नभए परिपूरक हुन् र आत्मबोधरआत्म साक्षात्कार गरेको ब्यक्ति यी सबैको साक्षी हुन्छ, यही नै अध्यात्मको रहस्य हो र जीवनको अन्तिम उपलब्धी हो ।” मित्रहरु हामीहरु आत्मा हौँ, शरीर हैनौँ, यस कुरालाई हामीहरुले realize गर्नु पर्छ ।
म अहिले तपाइहरुको सामु आप्mना अनुभूतिहरु आवाजमा ब्यक्त गरिरहेको छु, मलाई कसले भनेको छ त्यसो गर्न ? बेला बेलामा मैले मेरा दुई हातहरुले इशारा गरिरहेको छु, त्यो इशारा गर्न कसले भनेको छ । त्यो अदृश्य शक्ति भनेको आध्यात्मिक शक्ति हो, जुन देखिन्छ त्यो मात्र सत्य हैन, दाउरामा आगो देख्न सकिदैन त्यस्तै दुधमा घिऊ देख्न सकिदैन तर आगो पनि हुन्छ र घिऊ पनि हुन्छ ।
एउटा हराभरा पिपलको बोटमा त्यसको बीजलाई देख्न सकिदैन किनकि त्यो पूर्ण रुपमा विकसित भएको छैन । एउटा पिपलको कभभम मा पिपलको रुख बन्ने क्षमता छिपेको छ, “यथा पिण्डे तथा ब्रह्मण्डे” । “ईश्वर कर्ण भेटियो”(विहिवार, २१ असार, २०६९ – Thursday, July 5, 2012)
पाँच छ हजार वर्ष पहिले हाम्रो ऋषिहरुले ईश्वरीय कण आत्मा हो भनेर पत्ता लगाइ सकेको शाश्वततालाई आज आएर बैज्ञानिकहरुले ठूलो उपलब्धि सम्झेका छन् । मैले यसलाई अन्यथा भनेको हैन, मेरो सम्मान छ, यस उपलब्धिप्रति – यो आध्यात्मिक जगत्लाई केही हैन भन्नेहरुको लागि राम्रो प्रमाण पनि हो ।
ऋग्वेदमा सृष्टि सम्बत अर्थात ब्रह्म सम्बत्सर अनुसार अध्यात्मको समय, सनातनिक यात्राको समय, आत्मिक यात्राको समय पृथ्वीको जति आयु छ – त्यति नै मानिएको छ, जुन –१५ नील, ५५ खरब, २१ अरब, ९७ करोड २९,४९,८२ वर्ष उल्लेख छ ।
जेनेभा (एजेन्सी)– “युरोपियन अर्गनाइजेसन फर न्युक्लियर रिसर्च” का बैज्ञानिकहरुले बुधवार “ईश्वर कर्ण” अर्थात हिग्स बोसनको अस्तित्व फेला परेको दावी गरेका छन् । यो ठूलो उपलब्धि पनि हो तर यो शक्ति भनेको आध्यात्मिक शक्ति हो, त्यसलाई नजर अन्दाज गर्न सकिदैन, मैले भन्न खोजेको यत्ति हो ।
भौतिक जगत्को प्रमाण सहित, जेनेभा नजिकै सञ्चालित परियोजना “लार्ज हार्डोन कोलिडेर” बाट बैज्ञानिकहरुले अनुसन्धान प्रारम्भिक नै भए पनि यस बारे ठोस प्रमाण मिलेको बताएका छन् । राम्रो सुरुवात हो – Well begin is half done भन्छन् तर मैले भन्छु well begin is full done.
एउटा सोच्नु पर्ने कुरा के छ भने पृथ्वीलाई सदियौदेखि फन्फनी कसले घुमाएको छ, न यो गतिमा कुनै परिवर्तन नै आएको देखिन्छ । ईश्वर भनेको के हो यसको बारेमा तपाइहरुले पनि आपैm चिन्तन गर्नुहोस् त ? ईश्वर कर्ण बैज्ञानिकहरुले ४५ बर्षदेखि नै अनुसन्धान गरिरहेको भौतिक शास्त्रको एक अवधारणा हो ।
यस बारे ब्रह्मण्ड कसरी काम गर्छ भन्ने सिद्धान्त नै तयार भएको छ । यस तथ्यलाई हृदयश्थ गर्नु जरुरी छ न कि जानकारीको रुपमा कण्ठस्थ । बैज्ञानिकहरु पदार्थले आप्mनो पिण्डलाई कसरी ब्यावस्थापन गर्छ भन्ने ब्याख्या गर्न जुटेका थिए । उनीहरु कर्णमा भार किन हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्न लागि परेका थिए ।
अब उनीहरुको कोसिस ब्रह्माण्डको स्थापना कसरी भयो भन्ने पत्ता लगाउनु हुने छ । हिग्स बोसनबारे पत्ता लगाउनु भौतिक विज्ञानको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मानिएको छ । जति पनि भौतिक उपलब्धिहरु छन् ती लगभग सबै नै पश्चिमी मुलुकको दिन सकेको छ किन ?
हेर्नुहोस हाम्रो देशको प्रारम्भिक युद्ध वा क्रान्ति, यो किन ? पाश्चात्य मुलुक वा पश्चिमी देशहरु हाम्रो पूर्विय बर्ण ब्यावस्था अनुसार नै ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य र शुद्र जुन भन्छौ – त्यस मध्ये आज भौतिकताको चरम सीमामा पुगेको देश अमेरीका वैश्यहरुद्वारा शासित छ, यसो हुनुको कारणले नै पैसाद्वारा खेलाएर आप्mनो कार्य, आकांक्षा, स्थान र प्रतिष्ठा कायम गर्न सफल भएको छ ।
विश्वका धेरै जसो मुलुकहरु क्षत्रियहरुद्वारा नै शासित छन् , जसले तरवार चलाउनु बाहेक अरुमा आप्mनो बहादुरी देखेनन् – एउटा सानो प्रसङ्ग ल्याउन मन लाग्यो, अकबरको दरबारमा जवान दुई राजपुत गए र भने महाराज हामीहरु बहादुर छौं, हजूरको सेवामा आएका छौं – हामीहरु राजपुत हौँ, सेवाको मौका दिनुहोस् ।
बहादुरी केलाई भन्ने, यसको बारेमा परिभाषा नै बदल्नु पर्ने देखिन्छ । बहादुरी पनि दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा सापेक्ष र अर्को शाश्वत । अकवरले भने बहादुर छौ तिमीहरु, केही प्रमाण छ, उनीहरु दुबैले तुरुन्तै तरवार निकाले र मुस्कुराउँदै एक अर्काका छातीमा प्रहार गरे ।
उनीहरुको शरीरबाट अथाहा रगत बह्यो, उनीहरु मुस्कुराई रहेका थिए, अकबरले भने ए १ यो के गरेको ? तर उनीहरुले बहादुरीको प्रमाण त्यसरी दिए । अकबरले आप्m सहयोगी मानसिंहसित सोधे, मैले त सोधेकोमात्र थिए, यति भन्दै थिए अकबरले तर मानसिंहले भने कि अब कहिल्यै पनि नसोध्नु ?
किनकि क्षत्रिय त्यो हो जसले हाँसी हाँसी आफ्नो शरीर छोड्न सक्छ । त्यस्तै अब अहिले चीन र रसियामा शूद्रद्वारा शासन गर्न थाले र भने कि हामीहरु सेवक थियौ अति ने भयो अब हामीहरुले पनि शासन गर्छौ भनेर अगाडि आए ।
उनीहरुले सँस्कृतिको रक्षाको लागि भन्दै भवन, मन्दिर, मुर्ति सबै तोड्दै छन्, यो हामीहरुले देखेका छौँ, यो कुनै सँस्कृतिको रक्षा हैन बरु सँस्कृतिको हत्या हो । ब्राहणहरुले शासन गर्ने चेष्टा गरेका छैनन् , बेला आउँला, उनीहरुले पनि प्रयास गर्ने छन् ।
यो प्रसङ्ग ल्याएको किन भने कुनै पनि राष्ट्रको लागि प्रारम्भिक पूर्वाधार भनेको गास, बास र कपास हो, राज्यले त्यसको ग्यारेण्टी गर्नु पर्छ । कसरी सायद मैले भनी रहनु पर्दैन होला । यो प्रसङ्ग ल्याउनुको कारण के हो भने हेर्नुस त उक्त परियोजनामा दस अर्ब डलर खर्च भइसकेको छ ।
प्राध्यापक पेटर हिग्सले अनुसन्धानमा संलग्नलाई धन्यवाद दिए । उनकै नामबाट यो कर्णको नाम राखिएको हो । यो आफ्नो जीवनमा पत्याउनै नसकिने घट्ना भएको उनले बताए ।
पत्याउन त्यसैलाई सकिन्छ जसको नास हुन्छ तर आत्माको अजरता, अमरता नासवान छैन, यसलाई कसैले पत्याओस वा नपत्याओस् त्यससित कुनै सम्बन्ध छैन बरु यो अन्तर आत्माको उपलब्धि हो कि हैन त्यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
अनुसन्धान टोलीले आफ्नो “डाटा करेस्पण्डिङ्ग” मा उक्त कर्णमा १ सय २५ दशमलब ३ गिगाइलेक्ट्रोनो भोल्ट अर्थात हरेक अणुमा हुने प्रोट्रोन भन्दा १ सय ३३ गुणा भार भएको पाइएको जनायो । टोलीले प्रयोगशालाका अडिटोरियम हलमा पत्राकार सम्मेलन गरी यस सम्बन्धी जानकारी दिएका हुन् ।
यो उपलब्धि ऐतिहासिक कोसेढुंगा भए पनि यस बारे अझै थप कार्य गर्नु पर्ने बैज्ञानिकहरुले जनाएका छन् । तर यो सुरुवात मात्र हो” “युरोपियन अर्गनाइजेसन फर न्युक्लियर रिसर्चका निर्देशक प्राध्यापक रोल्फ हौरले भने, हामीले नयाँ कर्णको आविष्कार गरेका छौं । एउटा सामान्य मान्छेको रुपमा पनि मलाई हामीले केही पायौ भन्ने लाग्छ ।
“विज्ञानको गति बाह्य हो भने अध्यात्मको गति आन्तरिक हो, विज्ञान परिधि हो भने अध्यात्म केन्द्र हो, विज्ञान शरीर हो भने अध्यात्म आत्मा हो, विज्ञान चिन्तन हो भने अध्यात्म प्रयोग, विज्ञान विचार हो भने अध्यात्म प्रक्रिया हो ।”
आध्यात्मिक उपलब्धि भनेको आफ्नो आत्माभन्दा ठूलो केही छैन भन्ने शाश्वततालाई आत्मसात् गर्नु हो । यस संसारमा पहिलो पंक्तिमा अर्को कसैलाई स्थान दिइन्छ भने त्यो अध्यात्मवादी हुन सक्दैन ।